Somaliland oo markii ugu horreysay hor-fadhiisanaysa Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay | Berberanews.com
Home WARARKA Dalka Somaliland oo markii ugu horreysay hor-fadhiisanaysa Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay
Somaliland oo markii ugu horreysay hor-fadhiisanaysa Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay
Hargeysa -(Berberanews)- Dawladda Somaliland iyo Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, ayaa markii ugu horreysay intii ay Somaliland jirtay kulan wadahadal ah ku yeelanaya magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya, kaasoo lagu lafa-guri doono arrimo xasaasiya oo qaddiyadda gooni-isu-taaggu qayb ka tahay.
Weftu ka socda Xukuumadda Somaliland iyo Golaha Wakiillada oo uu hoggaaminayo Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar, ayaa saaka u kicitimay dalka Kenya oo ay sheegeen inay fadhi gaar ah la yeelan doonaan Guddi ka socda Golaha Ammaanka iyo Nabadgelyada ee Jimciyada quruumaha ka dhaxaysa.
Weftigaasi waxa kale oo xubno ka ahaa Wasiirka Gaashaan-dhiga Md. Axmed X. Cali Cadami, Wasiirka Macdanta iyo biyaha Md. Xuseen Cabdi Ducaale, Wasiirka Shaqada iyo arrimaha bulshada Marwo Ilhaan Maxamed Jaamac iyo Guddoomiyaha Guddi hoosaadka arrimaha dibada iyo iskaashiga caalamiga ah ee Golaha Wakiilada Md. Xuseen Maxamed Cigge.
Wasiirka Arrimaha dibada oo ka hor intii aanu dalka ka dhoofin saxaafada ugu waramayay qolka nasashada ee madaarka Hargeysa ayaa tafaasiil ka bixiyay shirkaasi, waxaanu yidhi “Weftigan balaadhan ee ka socda xukuumadda iyo baarlamaanka waxaanu u baxaynaa dalka Kenya caasimadiisa Nairobi, halkaasi oo aanu kaga qeyb galayno shir ay qaban qaabisay Golaha Ammaanka ee qaramada midoobay Somaliland-na lagu soo casuumay. Waxaana Somaliland shirkaasi loogu casuumay si toos ah waana fadhi khaas u ah Golaha Ammaanka iyo Somaliland. Way jiraan shirar kale oo Golaha Ammaanku la yeelanayo Soomaaliya.”
Wasiirka oo ka hadlayay waxa fadhigan ay la yeelanayaan guddi ka socda qaramada midoobay lagaga hadlayo waxaanu yidhi “Fadhigan waxaanu kaga hadli doonaa qadiyada Somaliland, waxaanu uga warami doonaa inay Somaliland tahay dal nabadgelyo ah oo dimuqraadi ah oo xoriyadiisu madax banaanidiisu taam tahay oo ah dal adduunka ka doonaya inuu ka helo ictiraaf iyo aqoonsi buuxa. Golaha ammaankuna waa Ha’yada ugu sareysa ha’yadaha dunida ka jira ee caalamku wada leeyahay.”
“Shirkani wuxuu inoo yahay sharaf waayo waa markii u horaysay ee tan iyo intii ay Somaliland jirtay ay xukuumadda Somaliland ay si toos ah oo fool ka fool ah ula fadhiisato jimciyada quruumaha ka dhaxaysa Golaheeda ammaanka oo ay u gudbiso qadiyada, dareenka iyo himilada shacabka reer Somaliland.” Ayuu yidhi Wasiirku.
Waxaanu isaga oo hadalkiisa sii wata intaa ku daray oo uu yidhi; “Anagoo tix gelinayna muhiimad ay leedahay fursadaasi waxay Somaliland ku faraxsan tahay inay ka qeyb gasho fadhigaasi gaarka u ah Somaliland iyo Golaha ammaanka.”
Wasiirka oo la weydiiyay waxa ka soo baxay dhoolatuskii shacbiga Somaliland ku muujiyeen sanad guuradii 20-aad ee ka soo wareegtay dib ula soo noqoshada madax banaanida Somaliland. “farriintaasi farriin adag ayay ahayd, jawaabo arrintaasi ku saabsana way soo gaadheen xukuumadda Somaliland.”
“Waxaannu aaminsan nahay in dawlado faro badani ay dhawaan aqoonsan doonaan Somaliland. Waxaynu ka war haynaa in maalin dhawayd Wasiir Ku Xigeenka dawlada Kenya uu ka hadlay aqoonsiga Somaliland, dawlado kale oo iyaguna ka hadli doonaana way jiraan.” Sidaa ayuu yidhi Wasiira arrimaha dibadda Somaliland Maxamed Cabdillaahi Cumar.
Previous articleDhanxiir, Cirro iyo Total
Next articleMaxaad kala socotaaTariikhda ku duugan Haamaha Shiidaalka Berbera & khasaaraha ay Shirkaddii TOTAL